Ogaden News Agency (ONA) – Dhagayso: Baaqii Raysal Wasaaraha oo Ay Ka Jawaabeen 3 da Jabhadood ee ONLF, OLF & Ginbot 7.
Dhagayso: Baaqii Raysal Wasaaraha oo Ay Ka Jawaabeen 3 da Jabhadood ee ONLF, OLF & Ginbot 7.
Waxaa waraysi ku saabsan baaqii Abiye Ahmed ee jabhadaha hubaysab laga waraystay masuuliyiinta Jabhada ONLF, OLF iyo Ginbot 7, baaqa u ku baaqay Raysal wasaaraha Itoobiya waxaana laga waraystay, gudoomiyaha Jabhada OLF Mr Da’ud Ibsa, Hogaanka Arimaha Dibada Ginbot 7 Mr Neiman Zelake iyo Gudoomiyaha Hogaanka warfaafinta JWXO Halgame Hassan Moalin.
Gudoomiyaha Hogaanka warfaafinta JWXO ayaa wuxuu ka hadlay baaqa raysal wasaaraha Itoobiya wuxuuna ku tilmaamay baaqa in u yahay mid taarkhi ah oo aan horay Itoobiya looga baranin wuna soo dhaweeyay in si nabada lagu xaliyo qadiyada Ogaadeniya oo mudo dheer ay cadaadis iyo dhibaato badan ku hayeen xukunadii kala duwanaa ee Itoobiya soo maray haba ugu daraato xukumada woyaanaha ee hataan aad moodo in taladii dalka gacantooda kasii baxayso.
Gudoomiyaha hogaanka warfaafintu waxa kale ee u sheegay in ay awal wadahadal diyaar u ahaayeen haddana u ururka ONLF diyaar u yahay in wada xaajood lagu dhameeyo dhibaatada ka taagan Ogaadeniya oo xudun u ah xasilooni darada ka jirta geeska Afrika.
Wadahadal marka la galayona waxaa muhiim ah in ay labada dhicnaba diyaar u yihiin.
Madane Hassan Moalin ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay colaada u dhaxaysa soomaalida iyo Oromada ee ka socota xuduuda Oromada iyo Soomaalida asagoo sheegay in kooxda TPLF ay dabada ka riixayso dagaalkaasi ayna rabto inay xukunka kusii dheeraysteen asagoo ku baaqay in dagaalkaas la joojiyo.
Sidoo kale waxaa ayaguna dhankooda ka hadlay Gudoomiyaha Jabahda OLF Da’ud Ibsa iyo Higaanka Arimaha dibada Jabhada Ginbot 7 Neinan Zelake waxayna sidoo kale soo dhaweeyeen baaqa raysal wasaaraha Itoobiya.
Hoos ka dhagayso waraysiga ay laanta Afka Axmaariga ee VOA ay la yeelatay masuuliyiintii 3 da Jabhadood ee raysal wasaaruhu baaqa usoo diray.